Ngathi-Abenzi bezigidi | Izisombululo ze-MM INC, isisombululo se-mm, isisombululo se-mm, isisombululo se-mm isisombululo, isisombululo se-mm, isisombululo se-mm isisombululo, isisombululo sabenzi bezigidi, isisombululo sabenzi bezigidi, mm llc, izigidi zabenzi be-lc
Injongo yethu kukusombulula imiceli mngeni mininzi yabathengi bethu kunye nokubonelela ngamava abalaseleyo.
Isisombululo sokufuduka sinikezelwe: 22,156.
Izisombululo zezomthetho: 19,132.
Izisombululo zeenkampani, ezibonelelweyo: 86,742
Ngenisa iimfuno Ukufuna ukwazi
Iinkonzo kunye nezisombululo
Sithathe iminyaka yamava ukugqibezela ubuchule bethu kunye nemibutho yamazwe kunye nobambiswano ukubonelela ngeenkonzo ezigqwesileyo kunye nezisombululo kubathengi bethu ngamaxabiso akhuphisanayo.
Sinikezela kuphela kwizisombululo ezenzelwe wena ezona zisebenzayo kuwe, kuphela emva kokuqonda iiNjongo zakho kunye neZithembiso.
Ngamava ethu amakhulu kunye neenkonzo ezahlukeneyo ezibonelelwe yinkampani yethu njengoko kuchaziwe apha ngasentla, sinceda abantu, iintsapho kunye namashishini ngobuchule bethu obuthile bokufuduka, ukuxhasa, ukwandisa nokukhulisa, sikwindawo entle ukukukhokela kwindlela eya empumelelweni. Nokuba unomdla wokufudukela kwenye indawo, ukudibana kunye nokufumana okanye ukukhangela iinkqubo zakho zasemva kweofisi, ukukhangela imali eyinkunzi okanye iqabane lobuchule okanye ujonge isicwangciso sokulandela isizukulwana esilandelayo, ukubonisana ngemali kunye nenkxaso okanye ujonge iinkonzo zepropathi yendawo ethengisa izindlu okanye iinkonzo ezinxulumene nokufuduka okanye imfundo phesheya okanye izisombululo ze-IT sinokukunceda kuzo zonke iinkonzo ngamaxabiso akhuphisana kakhulu.
Sicace gca kwaye sisekuhleni malunga neenkqubo zethu kwaye ndiyathemba ukuba amanqaku alandelayo aphendula imibuzo yakho ephambili
Ukuzibophelela kwethu kuthi kwaye "Iindlela zokuziphatha kubathengi bethu zihlala ziqala"
Silandela inkqubo ecwangcisiweyo, esebenzayo nehlengahlengisiweyo esebenza ngokona kulungileyo kubaxhasi bethu kunye neentsapho zabo njengesona sisombululo sisemgangathweni.
Simele njengesiqinisekiso somntu ngamnye, ngamnye, usapho, ishishini, amaqabane kunye nabantu abadibana nabo.
Unxibelelwano olukhawulezileyo noluchanekileyo.
Ukugcinwa kwemfihlo kwedatha kubaluleke kakhulu kuthi.
Ukuhlaziywa ngokumalunga nemithetho yamazwe aphesheya.
SingamaNgcali anolwazi olukhethekileyo lweshishini.
Isisombululo esimiselweyo kubo bonke abaThengi kunye neentsapho zabo.
Sifumana ukukuqonda wena, ishishini lakho kunye neenjongo zakho ngokupheleleyo kwaye ngokucokisekileyo ngaphambi kokuxoxa ngeendlela ezinokubakho okanye amathuba.
Sisebenza ngenqanaba eliphezulu lovelwano kunye nomonde kumthengi wethu, yonke imibuzo yakho iphendulwa ngexesha elifutshane kakhulu kunye nezisombululo ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwiimfuno zakho kunye nemeko.
Ngamaxesha onke sihlala sigcwele, ngokupheleleyo kwaye siyimpumelelo injongo.
Sijolise kugxilwe kwezona lulaezona zisombululo zilula kunye nezona zilungileyo, kubaxumi bethu.
Ngonxibelelwano olwahlukileyo kunye nokuma ngaphakathi kwamashishini esisebenza kuwo ngokukhethekileyo, sinikezela abathengi bethu ngokufikelela kokufikelela kwamanzi ngokupheleleyo kwamathemba.
Nceda ufunde malunga nenkqubo yokusebenza yabaxumi bethu kunye namaqabane ukusebenza kwethu .
Izisombululo zethu zaBantu, iiNtsapho, kunye neziManyano
Ishishini lokuThengisa / ukuThenga
Zonke iinkonzo kunye nesisombululo
Ukuseta ishishini kunye nokwandiswa
Ingcebiso ngeXesha lokuhlala
Ingcebiso yokuhlala isigxina
Amazwe angaphezu kwama-60
Siyabaxhasa abaBodwa kunye neeNkampani.
Amazwe angama-28 + angama-60 emhlabeni jikelele. Akukho sidingo sokuba sisityebi kakhulu.
Asibabizi abafundi ngokucebisana kwethu.
Iqela lethu linika uluhlu olubanzi lwezisombululo zeshishini zehlabathi.
Silungiselela iinkonzo zexabiso eliphantsi zomthetho kwiiNtsapho, umntu ngamnye.
Zikhangele okanye usebenzise iiNkonzo zethu.
Iingcebiso zeearhente zeeNdawo
Ngenxa yentsebenzo kunye nokuThobela.
Inobuchule obukhulu kwi-accounting, kwirhafu.
Amazwe angama-96 kunye nama-28 e-USA
Iiakhawunti zeBhanki kumazwe angama-95 kunye nakwamanye amazwe angama-28 e-USA
Uneshishini ekufuneka liqhutywa, sivumele sisingathe ubunzima benkqubo ye-HR yakho.
Sebenzisa iPortal yeJob yethu yasimahla yeendleko ukukhangela abasebenzi naphi na emhlabeni.
I-EU kunye nolawulo lwaselunxwemeni
Iiofisi ezichanekileyo kwiidilesi zomhlaba ezinomdla ezingama-64
Imveliso yoyilo nguMyili oNgcono ukusuka kwi-200 yeedola
Iiwebhusayithi ezenzelwe wena
Uyilo oluHleliweyo kunye nolwahlukileyo oluqala ukusuka kwi-200 yeedola
Iakhawunti yoMthengisi kunye neSango lokuBhatala
Ukwamkelwa kwentlawulo kumazwe ayi-190
Amanani Virtual kumazwe 89 kunye nezixeko ezingama-290.
Sinikezela ngezisombululo zeCRM kunye nokudityaniswa ukuze kukuxhobise ngolawulo olungcono kwishishini lakho.
Jika ujike kwiNgcebiso
Thina bakwiMiliyoni yezigidi kuqala sigxile ekwenzeni ishishini liphumelele.
Ukusebenza kweZisombululo eziNkulu
Sinothungelwano olomeleleyo kunye nokunxibelelana namaziko ezemali kwiimfuno zakho zenkxaso mali.
Ukuxhasa ngemali izixhobo zakho zikuvumela ukuba ugcine imali yakho kwiimfuno ezahlukeneyo zeshishini.
Oochwephesha bethu bobuchule banobuchule obukhulu kwi-accounting, kwirhafu, kuqoqosho nakwithiyori.
Iiprojekthi ezili-1000 + ezigqityiweyo
Sicwangcisa iinkonzo zomthetho ezixabisa kancinci, iiNtsapho, umntu ngamnye, Abafundi, iinkampani kunye naMashishini.
Sikunikeza phantse naluphi na uhlobo lwenkonzo yezemali esemthethweni.
Sixhasa abaBodwa kunye neeNkampani ekufumaneni amathuba nabagqatswa, ngokulandelelana.
Iqela lethu linika uluhlu olubanzi lwezisombululo zeshishini zehlabathi
Sikunceda ekufumaneni iinkokheli ezifanelekileyo ekunikezeleni amandla aphakamileyo afunekayo ekukhuleni kweshishini.
Sibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo zokunceda amashishini aqala kwimvumelwano yengqesho, ukuphathwa kwabasebenzi, ukuhlawula irhafu kunye nerhafu.
Thatha ithuba lolwazi lwamashishini kunye neendlela zokuqesha eziqinisekisiweyo.
Sixhasa abaBodwa kunye neeNkampani ekufumaneni amathuba
Besibonelela ngeenkonzo nokubonisana kumashishini okumisela amashishini, ukwanda nokukhula.
Ulwandiso lweShishini lamanye amazwe
Iqela lethu linikezela uluhlu olubanzi lwezisombululo zeshishini zehlabathi eziya kuvumela ishishini lakho ukuba liphumelele.
Sikunceda ekufumaneni iinkokheli ezifanelekileyo ekunikezeleni amandla aphakamileyo afunekayo ekukhuleni kweshishini
Amanani Virtual kumazwe 89 kunye nezixeko ezingama-290
Uyilo loMdibaniso kunye noYilayo, uXanduva, u-Navigational kunye ne-SEO OPTIMIZED
Umnikezeli wesisombululo omnye wokubonelela ngezisombululo kumashishini
Izisombululo ze-Ecommerce zomgangatho wamazwe
Kuphuhliswe ngaphezulu kwe-351+ iiaphulelo zabaxumi bamanye amazwe.
Ubunjineli bemveliso yesoftware ukusuka ekubonisaneni nasekuphuhliseni, kuvavanyo kunye nakwi-devOps.
Iimpawu zakho zentengiso kunye nokukhula kweemveliso ezikwi-Intanethi kunye nesizukulwane sokukhokela.
Ukwenza isiphumo kumashishini aphezulu kunye neengeniso
Izisombululo zeBlockchain ezenziwe ngezifiso, akukhathaleki mveliso yakho.
Hlaziya ulwazi lwakho olunxulumene neenkonzo ezahlukeneyo esinikezela ngazo.
Yazi malunga neziganeko zamanye amazwe.
Fumana iindaba zakutshanje ngofuduko, imfundo, iinkqubo zeshishini, HR, utshintsho lweshishini lwamazwe aphesheya olusichaphazela sonke, nokunye.
Mema abahlobo bakho, osebenza nabo, usapho kwaye wenze amashishini amatsha kunye nonxibelelwano lwentlalo.
Ukuba ufumana naziphi na iinkonzo zethu kunenzondelelo efanelekileyo kunye nenkonzo yokuthobela ayizizo iindleko.
Izisombululo ze-Ecommerce zomgangatho wamazwe.
Iakhawunti yomthengisi kunye namasango okuhlawula kunye namasango okuhlawula
Sinikezela ngezisombululo zokugqibezela intlawulo yesango
Iimpawu zakho zentengiso kunye nokukhula kweemveliso ezikwi-Intanethi kunye nesizukulwane sokukhokela
Ndingumnini weShishini elizimeleyo ungandinceda njani?
Ngamava ethu amakhulu, ubungcali kunye neenkonzo ezininzi ezibonelelwe ngumbutho wethu kunye nenkampani, besinceda kwaye siququzelela abanini bamashishini, iinkampani kunye neendawo zokuhlala, kunye neentsapho zabo ukubandakanya inkampani kunye nokuseta amashishini amatsha, ukwandisa, ukukhula kunye nokugcina amashishini abo okanye ufuna umsebenzi, sikulunge kakhulu ukukukhokela kwindlela eya empumelelweni. Nokuba unomdla kwi-Merger kunye nokuFumana, ukufudukela kwenye indawo, ukufuna ukulayisha ngasemva imisebenzi e-ofisini kunye neenkqubo, ukuzama ukufumana imali okanye iqabane lobuchule okanye ujonge isicwangciso sakho sokulandela isizukulwana esilandelayo, okanye ujonge ukucebisa ngezindlu okanye iinkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe okanye imfundo kwelinye ilizwe okanye i-IT. Iinkonzo esinokukunceda kuzo zonke iinkonzo njengoko zikhankanyiwe.
Sibonelela ngeenkonzo ezininzi kubathengi bethu bamanye amazwe kunye namaqabane abandakanya abantu, abatyali mali, iimali zotyalo-mali / iingxowa-mali ze-VC, iinkampani kunye nabarhwebi. Ukuphulukana, kweeprojekthi ezinokwenzeka nezinokwenzeka ezinokubakho, sinako ukuncedisa kubuhlakani obunenzuzo kunye namathuba enkxaso mali, ukuba ayafuneka.